के छ परदेशीको हालखबर ?
निर्मला घिमिरे सोमबार, चैत १७, २०७६, ०९:२६
काठमाडौं–यतिबेला विश्व श्रम बजार र समग्र आप्रवासन क्षेत्र कोभिड १९ (कोरोना भाइरस) को चपेटामा छ।
कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि एक देशबाट अर्को देश आवागमनमा प्रतिबन्ध तथा देशभित्रै पनि गरिएको बन्दाबन्दी (लक डाउन)ले समग्र आप्रवासन प्रभावित बनेको छ।
अमेरिका तथा विभिन्न युरोपियन मुलुकहरुले नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिक धमाधम लैजानसमेत सुरु गरेका छन्।
तर नेपाल सरकारले विश्वका विभिन्न मुलुकमा पुगेका आधा करोडभन्दा बढी नेपालीलाई स्वदेश फर्काएर सुरक्षित राख्ने आँट गर्न सकेको छैन।
हाल रोजगारीको खोजिमा मात्रै भारतबाहेकका मुलुकमा ४० लाख नेपाली विदेशिएको सरकारी अनुमान छ। भारतमा करिब २५ लाख नेपाली रहेको अनुमान छ। यकिन तथ्यांक भने सरकारसँग नै छैन। त्यस्तै अध्ययन तथा विभिन्न सिलसिलामा नेपालीको ठूलो संख्या विदेशिएको छ।
यो महामारीलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले नेपालीहरु जुन मुलुकमा छन् सम्बन्धित मुलुकमै सुरक्षित रहन आग्रह गरिरहेको छ। यो आपतकालीन अबस्थामा यदि कुनै समस्या परे समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सरकारले कूटनीतिक नियोगहरुलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ।
नेपालीहरुका प्रमुख गन्तव्य मुलुक अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, कतार, कुवेत, साउदी, बेलायत, भारत लगायत विश्वभरि नै अहिले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको छ।
यो समाचार तयार पार्दासम्म रोजगारी अध्ययन तथा विभिनन सिलसिलामा विश्वका विभिन्न मुलुकमा पुगेका र फर्किएको अवस्थाका ३२ नेपालीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। जसमध्ये ३ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३ नेपाली निको भएका छन्।
कोरोना संक्रमणले भयावह रुप लिँदै गएको मुलुकमा रहेका नेपालीहरु कस्तो अवस्थामा छन्? उनीहरु के भन्छन् ? नेपाल लाइभले उनीहरुसँग यसै विषयमा रहेर कुराकानी गरेको छ।
सेल्फ क्वारेन्टाइनमै दिनहरु बितिरहेका छन्ः भानुभक्त गच्छदार, मलेसिया
म हाल मलेसियाको जोहोरबरुमा छु। स्टोरकिपरको काम गर्छु। तर अहिले मलेसियामा लकडाउन छ। बाहिर कतै अनावश्यक रुपमा निस्कन मिल्दैन। मलेसियाली सरकारको नियम पालना गर्दै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा दिनहरु बितिरहेका छन्। थुप्रै साथीहरु पनि सँगै छौँ। केही दूरी कायम राखेर बसेका छौँ। कम्पनीले क्वारेन्टाइनमा बसेको समयको तलब पनि बेसिकचाहिँ दिने भन्ने कुरा छ। तर यो महामाी कहिलेसम्म हो। अब के हुन्छ हेरौँ।
कोरोनाले भन्दा पनि डरले बिरामी भएर अस्पताल बसेँः अन्जन श्रेष्ठ, कतार
मेरो घर पोखरा हो। म रोजिरोटीको खोजीमा कतार आएका दुई वर्ष पुरा हुन लाग्यो। यहाँ कतारको दुखानस्थित क्युपी कम्पनीमा काम गर्छु। फिल्डको काम भएकाले कम्पनीमा बिदा छैन। म त कोरोनाले भन्दा पनि डरले बिरामी भएर १५ दिन जति अस्पतालमा बसेँ। अहिले निको भएर काममा फर्किएको छु। डरलाई पर राखेर काम गरिरहेको छु।
कम्पनीले जा भनिसक्यो, सरकारले हामीलाई बोलाउँदैन ?ः लक्ष्मणबहादुर सुनार, मुम्बई (भारत)
मेरो घर जोशीपुर ६ कैलाली हो। हाल भारतको मुम्बइस्थित एक होटलमा मजदूरी गर्छु। होटलको काम मार्च २० देखि नै ठप्प छ। मालिकले आफ्नै घर जा भनिरहेको छ। अन्यत्र काम खोज्न पनि सबै कलकारखाना बन्द छ। नेपाल फर्किन पनि लकडाउन छ।
आफू त यता अलपत्र परेँ परिवारमा मैले कमाएर पाल्नुपर्ने बुढीआमा, छोराछोरी र श्रीमतीलाई के जबाफ दिने?
यहाँ मजस्ता थुपै्र नेपाली समस्यामा छौँ। अरु देशले आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गरेको भन्ने समाचार सुन्न पाइन्छ। के हामीलाई चाहिँ सरकारले उद्धार गर्दैन? अब हाम्रो हालत के होला?
जापानमा लकडाउन छैन, कोरोना संक्रमण बढेसँगै केही त्रास छः चुडामणि काफ्ले, जापान
म जापान बस्न थालेको ६ वर्ष भयो। केही वर्षदेखि परिवार नै यतै बस्छौँ। टोकियोस्थित आफ्नै रेस्टुराँ छ। जापानमा लकडाउन त भएको छैन तर पनि चहलपहलमा भने केही कमि आएको छ। रेस्टुराँ व्यवसायमा पनि २० प्रतिशत कमि आएको छ। पछिल्लो समय जापानमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। त्रास बढेको छ। त्राससँगै सुरक्षाका उपाय अपनाउनुपर्ने अवस्था हो यो।
पहिले त धेरै त्रास थियो, अझै पनि बाँकी छ, के गर्नु काम गर्नैपर्छः लक्ष्मण कँडेल, दक्षिण कोरिया
मेरो घर स्याङ्जा। हाल म दक्षिण कोरियामा कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी संक्रमित भएको थेगु सहरमा बस्छु। चीनबाट फैलिएको कोरोना चीनपछि दक्षिण कोरियाको थेगु सहरमा एकदमै नराम्रोसँग फैलियो। त्यो बेला त अब बाँचेर नेपाल फर्कन पाइन्छ जस्तै लागेको थिएन, धेरै डर थियो। अहिले पनि डर त छ तर पहिलेको भन्दा केही राहत मिलेको छ। डर लाग्छ भनेर घर बस्न पाइन्न। कम्पनीको काम निरन्तर चलिरहेको छ।
काम नपाई फिर्ता हुन्छु कि भन्ने डर छः सन्तोष चौहान, माल्टा
म माल्टा आइपुगेको आइतबार २३ दिन पुग्यो। यहाँ लकडाउन भनेर त्यस्तो धेरै कडा त छैन। बाहिर जान मिलिरहेको छ। तर मैले काम सुरु गर्न पाएको छैन। एक महिनाको भिसा अवधि छ, त्यो अवधि काम सुरु नगर्दै सकिन लाग्यो। अब कम्पनीले काम नदिएर सिधै नेपाल फर्काए के गर्ने भन्ने चिन्ता छ। म्यानपावरलाई ९ लाख बुझाएर आएको। लामो समयसम्म कम्पनीहरु नचलेपछि मलाई नेपाल फिर्ता पठायो भने म के पो गर्ने होला ?
सुनसान छ रोम, हामी सेल्फ क्वारेन्टाइनमा छौँः दिवस सुवेदी, इटाली
मेरो घर सुनसरी इटहरी हो। म इटाली आएको ८ वर्ष भयो। हाल म रोममा डिजाइनरको रुपमा कार्यरत छु। अहिले विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको सबैभन्दा बढी प्रभाव इटालीमा छ। यहाँ हामीभन्दा हाम्रो परिवार धेरै चिन्तामा हुनुहुन्छ तर पछिल्लो समय यहाँ पुरै लकडाउन छ। म बस्ने रोम निकै सुनसान छ। सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तु घरघरमै पु¥याउन ल्याएको छ। बाहिर सुनेजस्तो डराउनुपर्ने अबस्था छैन। हामी सबै नेपालीहरु अहिले सेल्फ क्वारेन्टाइनमा सुरक्षित छौँ।
कृषिमा कसरी बृहत्तर रोजगारी सिर्जना गर्ने?
श्रमिकलाई तलब दिनैपर्छ : सरकार, उद्योगी भन्छन्- घरमा बस्नेलाई तलब दिन सकिन्न
संक्रमितलाई तीन तहमा व्यवस्थापन गर्ने कर्णाली प्रदेशको निर्णय बैठकले सङ्क्रमित तर कुनै लक्षण नदेखिएका बिरामीलाई जिल्लाका तहमा तोकिएको आइसोलेसनमा, लक्षण देखिनुका साथै सम्भावित जोखिम भएका बिरामीला... आइतबार, जेठ १८, २०७७
क्वारेन्टाइनमा खान नपाउँदा गाउँपालिका घेराउ भारतबाट आएका करीब १०० जना जिल्लाबासी सो क्वारेन्टाइनमा एक हप्तादेखि बस्दै आएका छन्। क्वारेन्टाइनमा रहेका राजकुमार खत्रीले आफूहरूले ख... आइतबार, जेठ १८, २०७७
स्पेनी प्रधानमन्त्री सान्चेजले लकडाउनको समय थप गर्न संसदको अनुमति पर्खंदै उनले स्पेनमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण तुलनात्मक रूपमा पहिलेभन्दा कम भएको भए पनि अझै पूर्ण नियन्त्रणमा आइ नसकेको भन्दै आगामी जुन २१ गत... आइतबार, जेठ १८, २०७७